မြန်နှုန်းမြင့်စက် V85P စက်ရုံ - တရုတ်မြန်နှုန်းမြင့်စက် V85P ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
Multiple Operations ဖြင့် Axis CNC Machining Centre အလိုအလျောက် Chip Control
နာမည်: V85P CNC စက်စင်တာစားပွဲအရွယ်အစား - ၁၀၀၀ * ၅၅၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း - ခရီးသွားလာခြင်း - ၈၀၀ / ၅၀၀ / ၅၀၀mm Z ဝင်ရိုးတန်း - ၅၀၀ မီလီမီတာဘောလုံး ၀ င်ရိုးအရွယ်အစား - ၃၆၁၆ လမ်းညွှန်လမ်း - ၃၅ လျင်မြန်သောအစာ: ၃၆/၃၆/၃၀ M / min Max load: 600kg BT40 45 ° 140mm ဗိုင်းလိပ်တံဒေါင်လိုက်စက်လည်ပတ်ရေးစင်တာ Fanuc β Motor 0i-MF စနစ်စက်ဖော်ပြချက် ၁။ အလယ်အလတ်အရွယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်မှိုများပါ ၀ င်လျှင်ဒေါင်လိုက် CNC စက်ကြိတ်စက် V85P ကိုအဓိကအားဖြင့်အလတ်စားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်မှိုများကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုသည်။ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ၂ ။
မြန်နှုန်းမြင့်ဒေါင်လိုက် CNC စက်၊ 2.5s Tool Change ကွန်ပျူတာစက်ကြိတ်စက်
အမည်: မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော Cnc စက်စင်တာအလုပ်စားပွဲ - ၉၀၀ * ၄၈၀ မီလီမီတာ X ဝင်ရိုးတန်း - ၈၀၀ မီလီမီတာ Y ဝင်ရိုးတန်း - ၆၀၀ မီလီမီတာ Z ဝင်ရိုးတန်း - ၆၀၀ မီလီမီတာ T အထိုင်: ၄-၁၈ * ကိရိယာပြောင်းခြင်း ၁၀၀ - ၂.၅ စက္ကန့်အများဆုံး - ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်မြန်နှုန်းမြင့်ဒေါင်လိုက်စက် Center VMC H86 2.5s Tool Change Time 24 Tool ATC လျင်မြန်စွာအသေးစိတ် - စက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှစ်မျိုးရရှိနိုင်သည်။ တစ်ခုမှာ X, Y နှင့် Z တို့၏ threeaxes အားလုံးအတွက် linear နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ အခြားတစ်ခုမှာ linear နည်းလမ်းများကို X-axis နှင့် Y-axis တွင်အသုံးပြုသည်။
မြင့်မားသောတိကျသော CNC ဒေါင်လိုက်စက်စက် ၉၀၀ * ၄၈၀ စားပွဲတင်အရွယ်နှင့် 10000rpm ဗိုင်းလိပ်တံ
အမည်: မြန်နှုန်းမြင့်တိကျသော VMC ခရီးသွားခြင်း - ၈၀၀ * ၆၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာစားပွဲဝိုင်းအရွယ်အစား - ၉၀၀ * ၄၈၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ - BT40 10000RPM T ၏အပေါက် - ၄-၁၈ * ၁၀၀ မြန်မြန်ဆန်ဆန် - ၄၈/၄၈/၄၈ M / min မက်စ်ဖြတ်တောက်မှု - ၁၅ M / min တည်နေရာတိကျမှု: 0.006mm အမြန်နှုန်းမြင့်မြင့်တိကျသောဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ BT40 10000rpm ဗိုင်းလိပ်တံလျင်မြန်စွာအသေးစိတ် - ၁။ အလွန်ကျယ်သောစက်ကိုယ်ထည်နှင့်ကော်လံအခြေခံဒီဇိုင်း၊ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်မြင့်မားသောကြံ့ခိုင်မှုဖြတ်ကူးခြင်းကိုစက်၏တင်းကျပ်မှုနှင့်မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုကိုသေချာစေရန် နှင့်လည်းလက်မှတ်ထိုး ...
H86 အကြီးစား CNC ကြိတ်စက်၊ မြန်နှုန်းမြင့် CNC ကြိတ်စက် ၁၅ မီတာ / မင်းဖြတ်သည့်အစာ
Model: H86 ခရီးသွားခြင်း - ၈၀၀ * ၆၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာအကွာအဝေးနှင့်ဗိုင်းကြား၊ အ ၀ င်အကြားနှင့် ၁၂၀-၇၂၀ မီလီမီတာအရှိန်နှုန်း - ၄၈/၄၈/၄၈ M / min ဗိုင်းလိပ်နှင့်ကော်လံအကြား - ၆၅၀.၅ မီလီမီတာဖြတ်တောက်သော Feedrate: 15 M / min ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာမြင့်မားသောတိကျမှုအမြင့် Speed ​​H86 H86 ဒေါင်လိုက် machinecenter သည်ဂျပန်မှတင်သွင်းသောထိန်းချုပ်မှုစနစ် (Mitsubishi (သို့) Fanuc) နှင့်၎င်းကိုထောက်ပံ့သော servo driver နှင့် motor ကိုသုံးရိုးတံဆက်ချိတ်ဆက်မှုကိုသဘောပေါက်သည်။ ပစ္စည်းဖယ်ရှားမှုနှုန်းသည်သမားရိုးကျစီအင်န်စီအေစက်ထက် ၁.၅ ဆပိုမိုများပြားသည်။
အလိုအလျောက်ဒေါင်လိုက် CNC စက်၊ ကိရိယာ ၂၄ ခုလက်မောင်းအမျိုးအစား CNC VMC စက်စက်
အမည်: မြန်နှုန်းမြင့်စက်စက်စင်တာဗိုင်းလိပ်တံ - BT40 ၄၅ ဒီဂရီ ATC အမျိုးအစား - ကိရိယာတန်ဆာပလာ ၂၄ ခုနှင့်အတူလက်အမျိုးအစားကိရိယာမဂ္ဂဇင်း - ၂၃၀၀ * ၃၁၄၅ * ၂၈၀၀ မီလီမီတာအမြင့်ဆုံးမီတာ - ၅၀၀ ကီလိုဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ - ၇.၅kw ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း - ၁၀၀၀၀ / ၁၂၀၀၀ / ၁၅၀၀၀rpm၊ နှင့်စားပွဲတင်: 120-720mm မြန်နှုန်းမြင့်ဒေါင်လိုက် CNC စက်စင်တာ 24 tools တွေကိုလက်အမျိုးအစား tool မဂ္ဂဇင်းလျင်မြန်စွာအသေးစိတ်: 1. ပိုမိုကျယ်ပြန်စက်ကိုယ်ထည်နှင့်ကော်လံအခြေစိုက်စခန်းဒီဇိုင်း, မြင့်မားသောမာကျောခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောတုံ့ပြန်မှုကိုသေချာစေရန်လက်ဝါးကပ်တိုင် Casting ...
အပြည့်အဝဖုံးအုပ်ထားသည့်ဒေါင်လိုက် CNC စက် H86A 5500 ကီလိုဂရမ်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်
အမည် - မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော Cnc စက်စင်တာ H86A ခရီးသွားခြင်း - ဗိုင်းလိပ်မှသည် ၈၀၀/၆၀၀ / ၆၀၀ မီလီမီတာအကွာအဝေး - ၁၂၀-၇၂၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံအချင်း - ၁၂၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း - ၅၀-၁၀၀၀၀rpm၊ ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း - ၇.၅kw အမြန်နှုန်း - ၄၈ မီတာ / မိထိဖြတ်တောက်ခြင်း - ၁၅ မီတာ / min High Efficiency 10000rpm 120mm အချင်းဗိုင်းလိပ်တံဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ H86A အမြန်အသေးစိတ်: 1. သံသတ္တုတစ်မျိုးလုံးသည်စက်၏ဗဟို၏တည်ငြိမ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်သေတ္တာအမျိုးအစားနှင့်အထွေထွေအမျိုးအစားဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်။ ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများပေါ့ပါးမှု၏ inertia ကိုလျော့နည်းစေသည်။
Roller Linear Way ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ၊ Direct Drive ဗိုင်းလိပ်တံ CNC စက်စင်တာ
အမည်: တိကျစွာစီနိုစက်စင်တာ H86 ဗိုင်းလိပ်တံဆက်သွယ်မှု - တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု ၁၀၀၀၀rpm၊ ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT40-150 ရှည်လျားသောနှာခေါင်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုဗိုင်းလိပ်တံ ATC အမျိုးအစား - ၂၄ ခုလက်မောင်းအမျိုးအစားကိရိယာမဂ္ဂဇင်း Rapid Feed: တိတိကျကျ ၄၈ မီလီမီတာတိတိကျကျ - 0.006mm Axis: Roller Linear Guide Way Travel: ၈၀၀/၆၀၀/၆၀၀ ၃ Axis Roller Linear Way H86 ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ BT40 Direct Drive ဗိုင်းလိပ်တံလျင်မြန်စွာအသေးစိတ် - ၁။ H86 ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာတွင်ဂျပန်၏ Controller စနစ် (Mitsubishi or Fanuc) နှင့်၎င်း၏ဖြည့်စွက်ချက်များ ...
24too Arm Automatic Vertical CNC စက်၊ 140mm Spindle အကြီးစား CNC စက်ပစ္စည်း
နာမည်: V85P CNC စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟို ၀ င်ရိုးတန်း - ခရီးစဉ် - ၈၀၀mm Y ဝင်ရိုးတန်း - ၅၀၀mm Z ဝင်ရိုးတန်း - ၅၀၀ မီလီမီတာ T အထိုင်: ၅-၁၈-၁၁၀ သံကြိုးအမျိုးအစား: BT40 ၄၅ °ဗိုင်းလိပ်တံအချင်း: 140mm မော်တာ: Fanuc β Motor BT40 45 ° 140mm ဗိုင်းလိပ်တံဒေါင်လိုက်ဒေါင်လိုက် Machining Centre Fanuc β Motor 0i-MF စနစ်စက်ဖော်ပြချက် ၁။ V85P ကို ​​FANUC Oi-MF (5) Controller System, Fanuc β servo motor, ဗိုင်းလိပ်တံဆီအအေး၊ အပူလဲလှယ်စက်၊ 24 tools ATC ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ x / y / z ဝင်ရိုးအတွက်မြန်ဆန်စွာအစာကျွေးခြင်း 36m / min၊ pa ပြုပြင်ခြင်းအတွက်မြင့်မားသောထိရောက်မှု ...
4 Axis /3Axis ဒေါင်လိုက် CNC စက် V85P 160 - 660mm Spindle နှင့် Table ကြားရှိအကွာအဝေး
အမည်: ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာဇယားအရွယ်အစား: ၁၀၀၀ * ၅၅၀ မီလီမီတာခရီးသွားလာခြင်း - ၈၀၀ * ၅၀၀ * ၅၀၀ မီလီမီတာအကွာအဝေး - ဗိုင်းလိပ်တံနှင့်ကော်လံအကြား - ၁၆၀ - ၆၆၀mm အကွာအဝေး - ၅၂၄ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံအလှည့်အမြန်နှုန်း - 10000/12000 / 15000rpm Spindle Taper: BT40-140 ATC အမျိုးအစား: 24tools အရည်အသွေးမြင့် Fanuc ဒေါင်လိုက်စက် centerV85P 1. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲကိုလက်ခံပြီးဖွဲ့စည်းပုံကိုပုံတူပွားစေရန်နှင့်တုန်ခါစေရန် detector ။ ၂။ Super wide base X ဝင်ရိုး X သည် ၁.၂၅ မီတာ၊ V85 ထက် ၀.၃၉ မီတာပိုကျယ်သည်။